Izicwangciso zotyalo mali zokuphuma ziphila kwi2019 | Ezezimali
Akukho mfihlo yokuba kulo nyaka i-2019 izakubanzima kakhulu kuzo zonke iimarike zezemali, zombini ezo ze-equities kunye nengeniso esisigxina. Oku kuboniswa yingcebiso yabona bahlalutyi babaluleke kakhulu bezemali abalumkisa ngelithi kulo nyaka kunokubakho izinto ezininzi ezothusayo kubatyali zimali abancinci nabaphakathi. Ngale ndlela, isalathiso esikhethiweyo sentengiso yaseSpain, i-Ibex 35, iqala ukusuka kwelona nqanaba liphantsi kule minyaka idlulileyo. Ngokukodwa, ukusuka Amanqaku e-8.500 kwaye emva kokuhla kwexabiso ngo-2018 kungekho ngaphantsi kwe-15%, ngokuhambelana nezinye iimarike zamazwe ngamazwe.
Ngale ndlela, ithemba lokutyala imali kwimarike yemasheya alithembisi konke konke. Hayi kangako. Ngaphandle kwento yokuba isebe lohlalutyo lweBankinter lijonga ukuba "siyaqhubeka nokucinga ukuba akukho ngqiqweni ukuba iimarike zentengiso zivalwe ngelahleko xa iziphumo zeshishini zanda ngamanani aphindwe kabini kwaye uqoqosho lwehlabathi lucotha kodwa alubhekisi nakweyiphi na imeko yokudodobala koqoqosho." Yinqaku lokuba nethemba elingabelwanga ngamanye ama-arhente ezezimali ngokuqinisekileyo angalunganga kwi isifo bayenzela iimarike zokulingana kulo nyaka.
Olunye lolu luvo luvela kubahlalutyi bezemali abazimeleyo abalumkisa ukuba kwiinyanga ezizayo i-Ibex 35 Ungandwendwela amanqanaba kumanqaku ayi-6.500 XNUMX. Oku ngokwenyani kuthetha ukuba ubulungisa kuzwelonke bunokwehla ngamanani aphindwe kabini kwaye ilahleko ke ngoko iya kuba nkulu kakhulu kubatyali mali abanezikhundla ezivulekileyo kwezi asethi zemali. I-panorama apho ukwahluka kucace gca phakathi kwabalamli abohlukeneyo bezezimali. Ke ngoko, eyona milinganiselo iphambili abanokuyisebenzisa abatyali mali abancinci kunye nobulumko nangaphezulu kwezinye izinto zobugcisa.
1 Iinkqubo-qhinga ngo-2019: amathuba
3 Khangela izitokhwe ezinkulu
4 Faka isicelo sokuthintela
5 Musa ukuthabathwa yimbuyekezo
6 Suka kumaxabiso aphikisanayo
Iinkqubo-qhinga ngo-2019: amathuba
Ewe kunjalo, akukho kunqongophala kwamazwi anegunya agxininisa ukuba uqoqosho luza kuba kakuhle kulo nyaka. Apho amaxabiso aphantsi kakhulu, kwaye inzuzo ibonakala ikhula malunga ne-6% kunye ne-8%. Njengomphumo wale meko ibonakalayo kwiimarike ze-equity, kubonakala kufanelekile ukuba imarike yemasheya iqhuba kakuhle. Abanye abahlalutyi bezezimali, njengaleyo ye-Bankinter, bachaza ukuba lo msebenzi mtsha wentengiso yesitokhwe kufuneka ube ulungele umdla wabatyali mali, kunye nembuyekezo engaphezulu kwe-10%.
Kwelinye icala, inye into ibonakala icacile kubo bonke, kwaye lelo lixa abatyali mali kufuneka bachaze isicwangciso sabo sokujongana nokwehla okanye nokudodobala koqoqosho okwaziswa ngabahlalutyi. Kububulumko ngakumbi ukulumka ukunqanda yonke into eyenzekileyo kwintlekele yoqoqosho yangaphambili. Apho indawo elungileyo yabatyali mali ishiye i-euro ezininzi apha endleleni. Ngesi sihlandlo, uluvo lwabahlalutyi bezentengiso aluvumelani, ngenxa yoko ukuchaza indlela yotyalo-mali akuyi kuba lula kulo nyaka. Izinto ezibalulekileyo njenge imfazwe yorhwebo phakathi kwe-US ne China, Ukuqeshwa kweBrexit okanye unyulo olufana nolweYurophu ngoMeyi kunokuba nefuthe elibonakalayo kuphuhliso lweemarike zesitokhwe kulo nyaka.
Ukujongana nale meko ngokubanzi, eyokuqala yezicwangciso zotyalo-mali zokwenza ukuba zibandakanye ukuphuhlisa imisebenzi yokuthenga kunye neyokuthengisa kuphela ngexesha elifutshane kakhulu. Elona nyathelo lilungileyo lokukhusela nokulondoloza imali yethu xa ujongene neemeko ezingazinzanga kakhulu kwiimarike zamashishini ezingenanzala emisiweyo. Ngale ndlela, isicwangciso esiliqili kulo msebenzi sisekwe ekusebenzeni kukhuseleko olunayo Ukukhula ngamandla inika umdla kakhulu. Ukuhamba kunokwenziwa kwiintsuku nje ezimbalwa. Ukuze ungabambeki kwizikhundla zokhuseleko oluhlalutyiweyo.
Kuwo nawuphi na unyaka, lo ayingunyaka wokuba wenze njani imisebenzi eyomeleleyo kakhulu. Ngaphandle kokuba babe nazo ebomini bethu, njengabazali bethu okanye ootatomkhulu bethu ngamanye amaxesha. Apho ibiyimpahla yexabiso eyinxalenye yelifa. Ewe, eli ayiloxesha elifanelekileyo lokuhlala kwezi ntshukumo kuba zinokubiza kakhulu. Ngokukodwa ukuba kukho iimfuno zokuhlawula amatyala ngamanye amaxesha okanye enye.
Khangela izitokhwe ezinkulu
Eli ayiloxesha lifanelekileyo lokuzama kwiivenkile ezincinci kakhulu. Phakathi kwezinye izizathu zokufaneleka okukhethekileyo, kuba zezo zibonisa i ukungazinzi okuphezulu kulungelelwaniso lwamaxabiso abo. Ngaphaya kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwezobuchwephesha ngokwabo. Kukhetha ke ukujolisa kwixabiso elikhulu lee-indices. Ayikuko ukuba baya kwenza ngcono, kodwa baya kubonelela ngokhuseleko olukhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi.
Kwelinye icala, ngoonobumba abakhulu kuya kuhlala kulula kwi ukuchacha kumaxabiso abo. Into ebiza kakhulu kwiinkampani ezincinci neziphakathi ukusukela ngamanye amaxesha abafikeleli kula manqanaba kwakhona. Kule minyaka imbalwa idlulileyo kukho imizekelo engenakubalwa ebalaselisa le meko ikhethekileyo. Esi sesinye isizathu sokukhetha isitokhwe esiphambili kuthengiso lwesitokhwe sikazwelonke okanye samanye amazwe. Hayi ngelize, uya kuhlala ukhuselekile kwaye ngaphezulu kwako konke kumaxesha okungazinzi okukhulu kwimarike yemasheya.
Faka isicelo sokuthintela
Ukubeka i-odolo yakho yokuthenga igunya elibizwa ngokuba yilahleko yokumisa liya kuba ngaphantsi kancinci kunokuba libalulekile kunyaka njengoko kunzima njengoko kulindeleke ukuba ube ngulo ka-2019. uqhelisela ukhuseleko ukukhusela umdla wakho njengomtyali mali ophakathi nophakathi. Ngesizathu esilula kakhulu sokuchaza kwaye equka wena uya kuba neelahleko onokucinga ngazo ngokusekwe kwiimfuno zakho ezithile. Ngale ndlela, uya kuthintela ukuba ungqameko olomeleleyo kwingxelo yakho yengeniso.
Ukufaka lo myalelo wokuncitshiswa kwelahleko kuya kufuneka kuphela ukuba ubhence ukuya kuthi ga kweliphi inqanaba lamaxabiso bambelela kwiindawo eziwayo kwiimarike zezabelo. Ngumlinganiso osebenzayo oza kukunceda ugcine imali oyityalileyo ngaphezulu kwezinye izinto zobugcisa. Ukongeza, inokusetyenziselwa nawuphi na umtyalomali omncinci nophakathi kwaye ngaphandle kweendleko zoqoqosho okanye ngohlobo lweekhomishini. Kuvulelekile kuzo zonke iintlobo zesicwangciso kwicandelo lotyalo-mali lwesitokhwe.
Musa ukuthabathwa yimbuyekezo
Kulo nyaka, inani elifanelekileyo njengobuyiso kwimarike yemasheya liya kuba yingozi ngakumbi. Kungenxa yokuba unokuwela kule migibe ibonelelwa ziimarike zezemali kwaye wenze izinto onokuzisola ngazo emva kweeseshoni ezimbalwa zorhwebo. Kungenxa yokuba umahluko phakathi kwe Ixabiso elicatshulweyo kunye nexabiso lokuthenga inokuba kude kakhulu. Lo ngomnye wemingcipheko ecace gca onokuthi ubhenceke kuyo kulo nyaka unzima ukuze wonge imali kunye noluhlu lweeasethi zemali.
Kwelinye icala, awungekhe ulibale ukuba ukubuyela kwakhona kwi Iinkqubo ze-bearish kufuneka zisetyenziselwe ngokuchaseneyo. Oko kukuthi, ukukhanyisa ipotifoliyo kancinci kancinci. Kungenxa yokuba unokuzifumana uziimeko ezingafunekiyo kwaye ezinokukhokelela ekubeni ikomkhulu lakho liwe ngengozi enkulu. Le yinto ekufuneka uyiqhelile kwiinyanga ezizayo. Kungenxa yokuba akukho mathandabuzo ukuba iyakuba sesinye sezona zilingo zinamandla okuba ungene kwizikhundla kwiimarike zezabelo.
Suka kumaxabiso aphikisanayo
Ngayiphi na imeko, kwaye ukuba nangayiphi na imeko, ufuna ukwenza imisebenzi kwimarike yemasheya kulo nyaka, akufuneki ukhethe ezona zokhuseleko zinzima ukuba zisebenze. Hayi lilize, ugwetyelwe ukuphuhlisa uthotho lwemisebenzi onokuzisola ngayo ngexesha elifutshane. Ukukunika umbono osondele ngakumbi wale nto, akukho nto ingcono kunokubeka njengomzekelo okwenzekileyo kunyaka ophelileyo Dia. Isabelo sisuke kwi-4 euro ukuya kwinqanaba le-0,30 euro. Awunyanzelekanga ukuba uphinde le ntsebenzo.
Ewe, kulo nyaka ngekhe kumangalise kakhulu ukuba olu hlobo lwezenzo kwezinye iisitokhwe ziphindaphindwe. Kwaye ke, kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi iimpawu zobuthathaka kwezi nkampani zidweliswe kwiimarike zemali. Ngaphaya kokuqwalaselwa kwayo kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko. Ayothusi into yokuba lo izakuba ngunyaka ogcwele izothuso ezinkulu. Kwaye nangona kuya kubakho amathuba eshishini, akuqinisekanga ukuba kuya kubakho ukuphazamiseka okuninzi kwimarike yemasheya, kuzwelonke nakwamanye amazwe.
Ngayiphi na imeko, kwaye njengesishwankathelo, ubulumko kufuneka ibe yeyona nto iphambili kuzo zonke izenzo zakho kwiimarike zezemali. Apho ngokungathandabuzekiyo kuza kubakho amaxesha amaninzi anzima kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho isitshixo siyakuba kukwenza ezona mpazamo zimbalwa kwaye oku kuya kufuneka uphephe imisebenzi ethile kwiimarike zezabelo. Emva kwayo yonke loo nto, yile nto ikulindeleyo kwiinyanga ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izicwangciso zotyalo mali zokuphuma ziphila kwi2019